İstanbul University Cerrahpaşa Shaqaalaynta Shaqaale Qandaraaslaha Qandaraasyada | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaShaqaalaha Qandaraaska ractstanbul ee Cerrahpaşa
Qoraalka rasmiga ah ee ku taariikhaysan 657 oo ku lifaaqan Go'aanka 4 iyo 06.06.1978 ee ku lifaaqan Go'aanka 7 iyo 15754 in loo shaqaaleeyo sida shaqaale qandaraas la galay sida ku xusan qodobka 28.06.2007 (B) ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ee no. Shaqaalaha qandaraasku ku qoran yihiin waxaa loo qori doonaa jagooyinka soo socda iyadoo lagu saleynayo 26566 KPSS (B) darajooyin kooxeed ah iyada oo la raacayo sadarka (B) ee qodobka dheeriga ah ee loo yaqaan '2' ee mabaa'diida ku saabsan wax ka beddelka mabaadi'da loogu talagalay Shaqaalaysiinta Qandaraasleyaasha Shaqaalaha.
LAMBARKA MIISAANIYADDA SHURUUDAHA DIIWAANKA CODE
NURSE 35 Miisaaniyadda gaarka ah Kalkaaliyeyaasha Caafimaadka Dugsiga Sare ee Caafimaadka
Qalin jabinta ka.
2018 KPSS P94 Qodobbada Nooca 50 iyo
Inaad Ka Gudubto Dhibcaha H1
1- Codsadayaasha dalbanaya shuruudaha gaarka ah ee kor lagu soo sheegay iyo Xeerka 657 48. si loo buuxiyo shuruudaha guud ee lagu qeexay qodobka.
2- Aan ka helin hawlgab ama hawlgab da 'bisil duq ah Hay'ad Lambarka Bulshada.
3- Si aad u aqbasho shuruudaha shaqada saacadaha oo dhan (oo ay ku jiraan habeen) dhammaan jagooyinka, si loo go'aamiyo maareynta waaxda ay quseyso hab aan usbuuca shaqada ahi uusan ka badneyn saacadaha 40;
4- Codsadeyaashu waa inay qaateen 2018 Xulashada Shakhsiyaadka Dadweynaha (KPSS). 2018 KPSS-P94 ayaa lagu salayn doonaa nooca dhibcaha.
5- 5917 ee Sharciga No. 47. 5. Baaragaraafka (A) Sida ku cad faqradda 2, 4-B waa la joojinayaa inta uu iska casilayo jagadiisa isagoo u shaqeynaya sidii shaqaale qandaraas ah; laga bilaabo taariikhda xiritaanka 1 (hal) sano ma dalban karo ka hor mudada.
Musharixiinta, gudahood 15 maalmood laga soo bilaabo taariikhda la shaaciyey ku dhawaaqista Rasmiga ah ee Gazette (ilaa dhamaadka saacadaha shaqada) www.istanbulc.edu.t waa Fadlan ku buuxi Foomka Codsiga iyo Arjiga Codsiga cinwaanka Waaxda Shaqaalaha Jaamacadda oo ay weheliso dukumintiga soo socda shaqsi ahaan. Dhamaadka dalabka, natiijooyinka Imtixaanka Xulashada Xulashada Dadweynaha ee ay shaaciyeen musharixiinta waxaa xaqiijin doona hay'addeenna Madaxtooyadda OSYM. Codsiyada musharraxiinta sameynaya bayaanka beenta lama aqbali doono waxaana looga shaqeyn doonaa sida ku xusan qodobada guud. Codsi waxaa lagu sameyn doonaa asaga oo qeexaya lambar aqoonsi ee loogu baahan yahay hal jago oo keliya. Haddii hal codsi ka badan la gudbiyo, labada dalabba waxaa loo qaddarin doonaa inay yihiin wax aan waxtar lahayn. Codsiyada lagu sameeyo boostada lama aqbali doono. Codsadeyaasha dib u dhigay taariikhda dalabka ama aqoontooda aan ku habooneyn lama aqbali doono.
TILMAAMAHA LOO BAAHAN YAHAY:
- Foom Codsi Sawir ah (Foom Codsi oo lagu daabacay bogga jaamacadda ayaa lagu buuxin doonaa.)
- Kaarka Aqoonsiga asalka ah iyo Photocopy
- Asalka iyo koobiga diblooma ah ama shahaadada qalinjabinta (wax soo saarka dowladda ayaa la aqbali doonaa.)
- 2018 Imtixaanka Shahaadada Imtixaanka KPSS
QIIMAYNTA iyo natiijooyinka codsiyada:
Kadib marka codsiyada ay qiimeeyaan Guddigu, natiijooyinka waxaa lagu soo saari doonaa barta internetka ee www.istanbulc.edu.tr ugu dambayn gudahood maalmaha shaqada ee 7. Tirada beddelka ayaa la go'aamin doonaa. Haddii guuleystayaasha waaweyn aysan codsan ballanta, guuleystayaasha shaaciyey ku guuleystaha waxaa loo yeeri doonaa siday u kala horreeyaan. Liisaska musharixiinta la magacaabayo, dukumiintiyada looga baahan yahay bilowga shaqada, waqtiga iyo goobta codsashada waa in laga raacaa www.istanbulc.edu.tr. Ogeysiis qoraal ama af ah looma sameyn doono dadka ay quseyso.
* Kuwa lagu helo inay samaysteen bayaano been ah ama inay runta qariyeen si kasta ha noqotee inta lagu gudajiray dalabka iyo hanaanka meelaynta ayaan qandaraas la gali doonin. Xitaa haddii heshiiska la dhammeeyo, waa la joojinayaa. Ma sheegan karaan wax xuquuq ah.
* Qodobada sharciga guud waxay quseeyaan qodobada aan lagu soo darin cadeynta.
Shaqaalaysiinta Shaqaale Qandaraaslaha ee Jaamacada Istanbul Cerrahpaşa
Qorshaha Magaalada ee Izmir waara